मानिस मरिसकेपछि अन्तिम संस्कार गर्न दिनु पर्दैन ? किन बिरोध गरेको ? हेर्नुहोस कारण त यस्तो पो रहेछ | मानिस मरिसकेपछि अन्तिम संस्कार गर्न दिनु पर्दैन ? किन बिरोध गरेको ? हेर्नुहोस कारण त यस्तो पो रहेछ – हिपमत
मानिस मरिसकेपछि अन्तिम संस्कार गर्न दिनु पर्दैन ? किन बिरोध गरेको ? हेर्नुहोस कारण त यस्तो पो रहेछ
पोखरा महानगरले वडा नं ११ मणिपाल शिक्षण अस्पतालभन्दा केही तलको सेती नदीस्थित रिठ्ठे घाटमा कोकोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट पोखरामा मृत्यु भएका स्याङ्जाका ६० वर्षीय पुरुषको शव व्यवस्थापन गर्ने निधो गर्‍यो ।
नेपाली सेनाले शव गाड्न खाल्डो खनेर ठिक्क पारिसकेका थिए । तर वडा नम्बर ११ र २० का वासिन्दाले विरोध गरे । सेती किनारमा शव गाड्दा आफूहरुलाई जोखिम हुने उनीहरुको तर्क थियो ।